Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Latin America i-Airbnb eNtsha yeeFavorites ezili-12
UAirbnb usandula ukuphuma neendawo zabo ezili-12 eziphambili zokuya ekhefini eLatin America.
Lo ngummandla ozele yinkcubeko, imbali kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi kwiminyaka yakutshanje eye yanda ekudumeni phakathi kwabakhenkethi abavela eUnited States. Ukongeza, ukuba noluntu olubanzi lwaseLatino, bekusoloko kukho umkhwa wokuhamba ukuya kummandla ukuphuhlisa nokugcina ubudlelwane bosapho oluyimfuneko namhlanje kunanini na ngaphambili.
Ngokwedatha evela ku-Airbnb, ummandla waseLatin America uye waba ngumkhwa kubahambi abasuka e-US. Ngokusekwe kwinani lophendlo olwenziwe eqongeni, ezona zixeko zili-12 zidumileyo zezi:
1. ISan Juan, ePuerto Rico
3. ETulum, eMexico
4. eCancun, eMexico
5. IsiXeko saseMexico, eMexico
7. I-Playa del Carmen, eMéxico
8. Ensenada, eMexico
9. eMedellin, eKholombiya
10. IPuerto Penasco, eMexico
12. ICartagena de Indias, eKholombiya
Xa kufikwa kwixesha lasehlotyeni, ezona ndawo zidumileyo yayizizilwandle, ngakumbi eMexico apho iPlaya del Carmen kunye ne-Ensenada zazisiya khona ngo-2021, zonyuka izikhundla ezi-6 xa kuthelekiswa no-2019, kunye neTulum, eyayisuka kwinani lesi-7 ukuya kwinombolo yesi-3. kuluhlu, ngokusekelwe kwinani lophendlo. Iindawo esixekweni nazo ezivela kuludwe, kubandakanya iMexico City kunye neMedellín, omabini la mazwe anikezelwe kwinkcubeko yawo ephezulu.
Ummandla umele ukhetho olufikelelekayo kubakhenkethi baseNyakatho Melika ngexabiso eliphakathi ngobusuku obungaphantsi kwe-150 yeedola.
“Ayikuphela nje abahambi baseMelika abajonga iindawo ezinomtsalane zenkcubeko kunye nokubaleka elunxwemeni lwetropikhi, kodwa uninzi olusuka kuluntu lwaseLatinx lujonge ukunxulumana kwakhona neengcambu zabo kwaye batyelele indawo yabo yemvelaphi ukuze babone abazali, ootatomkhulu nosapho olongezelelweyo. I-Airbnb ibonelela ngamathuba okufumana indawo yokuhlala kwizixeko ezikhulu nezincinci kuzo zonke iindawo zalo mmandla,” utshilo uStephanie Ruiz, uMlawuli wezoNxibelelwano weLatin America.